ဘောလုံးလောကမှာ ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်အတွဲများ (၂)
တစ်ခေတ်တစ်ခါတုန်းက ဘောလုံးလောကမှာ ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်အတွဲများ (၂)
31 Oct 2018 . 11:23 AM
မော်ဒန်ဘောလုံးလောကမှာ (၄-၂-၃-၁)ကစားကွက် ခေတ်စားလာတာနဲ့အမျှ တိုက်စစ်မှူး (၂)ဦးထား ကစားတဲ့ အသင်းတွေ သိပ်မရှိတော့ဘူး။ အရင်ကဆိုရင် (၄-၄-၂) ကစားကွက်နဲ့ အောင်မြင်မှု ရယူခဲ့တဲ့ အသင်းတွေ အများကြီးရှိပြီး အဲဒီကစားကွက်နဲ့အတူ ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်အတွဲအဖက်တွေလည်း အများကြီးပါပဲ။ တစ်ခေတ်တစ်ခါတုန်းက ဘောလုံးလောကမှာ ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်အတွဲအဖက် အပိုင်း(၁)အပြီးမှာတော့ အခု အပိုင်း(၂)ကို ဆက်လက် ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။
Andriy Shevchenko & Oliver Bierhoff (AC Milan)
တစ်ချိန်တုန်းက ဘောလုံးလောကမှာ ပြိုင်ဘက်ကင်းလို့ ဆိုရမယ့် တိုက်စစ်မှူးနှစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ‘ရှီဗာ’လို့ နာမည်ပြောင် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသူ ရှက်ဗ်ချင်ကိုက လျင်မြန်တဲ့ ပြေးအား၊ တိုးအား၊ အဆုံးသတ်စွမ်းရည် ကောင်းမွန်တဲ့သူ၊ ဘီယာဟော့ဖ်က အမြင့်ဘော၊ ခေါင်းတိုက်ကောင်းပြီး တည်ငြိမ်မှုရှိတဲ့ ကစားသမားဖြစ်လို့ မတူညီတဲ့ တိုက်စစ်အတွဲအဖက်ကြောင့် ပြိုင်ဘက်ခံစစ်က ထိန်းချုပ်ရခက်ခဲခဲ့တယ်။
Jimmy Floyd Hasselbaink & Eidur Gudjohnsen (Chelsea)
ချယ်လ်ဆီး ပရိသတ်တွေ အမြဲအမှတ်ရနေတဲ့ တိုက်စစ်အတွဲအဖက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဟာဆယ်ဘိန့်ရဲ့ Rocket ကန်ချက်တွေ၊ ဂူဂျွန်ဆင်ရဲ့ အလိမ်အလှည့်၊ ရင်သပ်ရှုမောစရာ Skill တွေက အခုအချိန်အထိ ပရိသတ်တွေရဲ့ ပါးစပ်ဖျားမှာ တသသပြောနေရဆဲပါပဲ။
Diego Tristan and Roy Makaay (Deportivo La Coruna)
၁၉၉၉-၀၀ ရာသီတုန်းက ဘာစီလိုနာ၊ ရီးယဲလ်တို့ကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ဒီပို့တီဗိုအသင်း လာလီဂါချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာက ထရစ္စတန်၊ မက်ကိုင်း တိုက်စစ်အတွဲကြောင့်လို့ ပြောရင်မမှားပါဘူး။ အဲဒီရာသီတုန်းက မက်ကိုင်းက (၂၂)ဂိုး၊ ထရစ္စတန်က (၁၈)ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပြီး သူတို့တိုက်စစ်အတွဲက ပြိုင်ဘက်အသင်းအတွက် နတ်ဆိုးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။
Chris Sutton & Henrik Larsson (Celtic)
ဆဲလ်တစ်အသင်းရဲ့ နာမည်ကျော်တိုက်စစ်အတွဲဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၀-၀၁ ရာသီတုန်းက ဆပ်တန်နဲ့ လာဆင်အတွဲဟာ ထိန်းချုပ်ရခက်တဲ့ တိုက်စစ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး လာဆင်ဟာ ပြည်တွင်းလိဂ်မှာ (၃၅)ပွဲကစား (၃၇)ဂိုးအထိ သွင်းယူခဲ့တယ်။
David Trezeguet & Alessandro Del Piero (Juventus)
အင်ဇာဂီခေတ်လွန် ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းတိုက်စစ်မှာ ထရက်ဇီဂေး+ဒယ်လ်ပီယာရို အတွဲက အကောင်းဆုံး ဦးဆောင်ခဲ့တယ်။ သူတို့နှစ်ဦးတွဲပြီး ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းအတွက် အဓိက ဆုဖလားတွေလည်း ရယူခဲ့ကြတယ်။
အကောင်းဆုံး တိုက်စစ်အတွဲဆိုရင် အွန်နရီနဲ့ ဘားကမ့်တို့ကို မပါမဖြစ်ရွေးချယ်ရမှာပါ။ တစ်ချိန်က သူတို့နှစ်ဦးဟာ ပြိုင်ဘက်ခံစစ်တွေအတွက် အိပ်မက်ဆိုးဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။
Cristiano Ronaldo & Rooney (Manchester United)
အန်ဒီကိုးလ်၊ ဒွိုက်ယော့ခ်တို့အတွဲပြီးရင် စီရော်နယ်လ်ဒိုနဲ့ ရွန်နီတို့ဟာ မန်ယူအသင်းရဲ့အကောင်းဆုံး တိုက်စစ်အတွဲလို့ သတ်မှတ်ရမယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒို၊ ရွန်နီ၊ တီဗက်ဇ်တို့ရဲ့ ခေတ်မှာ မန်ယူအသင်း ပြည်တွင်းမှာမကဘဲ ဥရောပမှာပါ လွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့တယ်။
ပရိသတ်ကြီးရေ .. ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှေက်မှာ အတွဲအဖက် ညီညီကစားနိုင်ခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်အတွဲအဖက်က အများကြီးပါပဲ။ အဲဒီအထဲကနေ ပရိသတ်တွေနဲ့ ရင်းနှီးပြီးသား နာမည်ကျော်ဘောလုံးသမားတွေကို ရွေးချယ်ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဘယ်တိုက်စစ်အတွဲအဖက်ကို အကြိုက်ဆုံးလဲဆိုတာ သိပါရစေလား . . .
Photo:dreamteamfc,Sports Illustrated,Getty Images,Calcio Fanpage,Evening Standard
တဈခတျေတဈခါတုနျးက ဘောလုံးလောကမှာ ထငျရှားကြျောကွားခဲ့တဲ့ တိုကျစဈအတှဲမြား (၂)
မျောဒနျဘောလုံးလောကမှာ (၄-၂-၃-၁)ကစားကှကျ ခတျေစားလာတာနဲ့အမြှ တိုကျစဈမှူး (၂)ဦးထား ကစားတဲ့ အသငျးတှေ သိပျမရှိတော့ဘူး။ အရငျကဆိုရငျ (၄-၄-၂) ကစားကှကျနဲ့ အောငျမွငျမှု ရယူခဲ့တဲ့ အသငျးတှေ အမြားကွီးရှိပွီး အဲဒီကစားကှကျနဲ့အတူ ထငျရှားကြျောကွားခဲ့တဲ့ တိုကျစဈအတှဲအဖကျတှလေညျး အမြားကွီးပါပဲ။ တဈခတျေတဈခါတုနျးက ဘောလုံးလောကမှာ ထငျရှားကြျောကွားခဲ့တဲ့ တိုကျစဈအတှဲအဖကျ အပိုငျး(၁)အပွီးမှာတော့ အခု အပိုငျး(၂)ကို ဆကျလကျ ဖျောပွလိုကျရပါတယျ။
တဈခြိနျတုနျးက ဘောလုံးလောကမှာ ပွိုငျဘကျကငျးလို့ ဆိုရမယျ့ တိုကျစဈမှူးနှဈဦးဖွဈပါတယျ။ ‘ရှီဗာ’လို့ နာမညျပွောငျ သတျမှတျခံခဲ့ရသူ ရှကျဗျခငျြကိုက လငျြမွနျတဲ့ ပွေးအား၊ တိုးအား၊ အဆုံးသတျစှမျးရညျ ကောငျးမှနျတဲ့သူ၊ ဘီယာဟော့ဖျက အမွငျ့ဘော၊ ခေါငျးတိုကျကောငျးပွီး တညျငွိမျမှုရှိတဲ့ ကစားသမားဖွဈလို့ မတူညီတဲ့ တိုကျစဈအတှဲအဖကျကွောငျ့ ပွိုငျဘကျခံစဈက ထိနျးခြုပျရခကျခဲခဲ့တယျ။
ခယျြလျဆီး ပရိသတျတှေ အမွဲအမှတျရနတေဲ့ တိုကျစဈအတှဲအဖကျဖွဈပါတယျ။ ဟာဆယျဘိနျ့ရဲ့ Rocket ကနျခကျြတှေ၊ ဂူဂြှနျဆငျရဲ့ အလိမျအလှညျ့၊ ရငျသပျရှုမောစရာ Skill တှကေ အခုအခြိနျအထိ ပရိသတျတှရေဲ့ ပါးစပျဖြားမှာ တသသပွောနရေဆဲပါပဲ။
၁၉၉၉-၀၀ ရာသီတုနျးက ဘာစီလိုနာ၊ ရီးယဲလျတို့ကို ကြျောဖွတျပွီး ဒီပို့တီဗိုအသငျး လာလီဂါခနျြပီယံဖွဈခဲ့တာက ထရစ်စတနျ၊ မကျကိုငျး တိုကျစဈအတှဲကွောငျ့လို့ ပွောရငျမမှားပါဘူး။ အဲဒီရာသီတုနျးက မကျကိုငျးက (၂၂)ဂိုး၊ ထရစ်စတနျက (၁၈)ဂိုးသှငျးယူခဲ့ပွီး သူတို့တိုကျစဈအတှဲက ပွိုငျဘကျအသငျးအတှကျ နတျဆိုးတှဖွေဈခဲ့တယျ။
ဆဲလျတဈအသငျးရဲ့ နာမညျကြျောတိုကျစဈအတှဲဖွဈပါတယျ။ ၂၀၀၀-၀၁ ရာသီတုနျးက ဆပျတနျနဲ့ လာဆငျအတှဲဟာ ထိနျးခြုပျရခကျတဲ့ တိုကျစဈဖွဈခဲ့ပွီး လာဆငျဟာ ပွညျတှငျးလိဂျမှာ (၃၅)ပှဲကစား (၃၇)ဂိုးအထိ သှငျးယူခဲ့တယျ။
အငျဇာဂီခတျေလှနျ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးတိုကျစဈမှာ ထရကျဇီဂေး+ဒယျလျပီယာရို အတှဲက အကောငျးဆုံး ဦးဆောငျခဲ့တယျ။ သူတို့နှဈဦးတှဲပွီး ဂြူဗငျတပျဈအသငျးအတှကျ အဓိက ဆုဖလားတှလေညျး ရယူခဲ့ကွတယျ။
အကောငျးဆုံး တိုကျစဈအတှဲဆိုရငျ အှနျနရီနဲ့ ဘားကမျ့တို့ကို မပါမဖွဈရှေးခယျြရမှာပါ။ တဈခြိနျက သူတို့နှဈဦးဟာ ပွိုငျဘကျခံစဈတှအေတှကျ အိပျမကျဆိုးဖွဈခဲ့ဖူးတယျ။
အနျဒီကိုးလျ၊ ဒှိုကျယော့ချတို့အတှဲပွီးရငျ စီရျောနယျလျဒိုနဲ့ ရှနျနီတို့ဟာ မနျယူအသငျးရဲ့အကောငျးဆုံး တိုကျစဈအတှဲလို့ သတျမှတျရမယျ။ စီရျောနယျလျဒို၊ ရှနျနီ၊ တီဗကျဇျတို့ရဲ့ ခတျေမှာ မနျယူအသငျး ပွညျတှငျးမှာမကဘဲ ဥရောပမှာပါ လှမျးမိုးနိုငျခဲ့တယျ။
ပရိသတျကွီးရေ .. ဘောလုံးသမိုငျးတဈလြှကျေမှာ အတှဲအဖကျ ညီညီကစားနိုငျခဲ့တဲ့ တိုကျစဈအတှဲအဖကျက အမြားကွီးပါပဲ။ အဲဒီအထဲကနေ ပရိသတျတှနေဲ့ ရငျးနှီးပွီးသား နာမညျကြျောဘောလုံးသမားတှကေို ရှေးခယျြဖျောပွခဲ့တာဖွဈပွီး ဘယျတိုကျစဈအတှဲအဖကျကို အကွိုကျဆုံးလဲဆိုတာ သိပါရစလေား . . .